Leedahay phone Windows ah oo raadinaya in ay u baddashaan Blackberry ah? Blackberry ayaa New Classic tusaale ahaan, waddaa on cusub BB 10 OS, waa sida ugu fiican ee macruufka aad 8/9 iyo Android 6.0 Marshmallow. Geesinimadan faanka ah oo dhan muuqaalada filayaa casriga ah, waxaana laga yaabaa in dhowr ka badan, telefoonka aad Blackberry noqon kartaa hanti aad u.
Laakiin markaas, sida aad u bedelan kartaa xogta laga telefoonka Windows in Blackberry?
Blackberry waa soo saaraha ah Ra'iisul casriga ah, laakiin waxa aan soo korsaday OS kasta. Waxaa wadaa OS gaar ah ay telefoonka. Sidaa awgeed, haddii aad ka beddelanaya phone Windows in Blackberry waxaad yeelan doontaa wareejiyo xogta siyaabo kala duwan sida ma jiraan habka weerarka si toos ah si ay u gudbiyaan xogta.
Halkan waxaan ka wada hadalnay laba siyaabood oo lacag la'aan ah si ay u gudbiyaan xog muhiim ah ka phone Windows in Blackberry:
Isticmaalka PC kala iibsiga
Isticmaalka muuqaalada blackberry hooyo ee suuqa kala iibsiga
Habka 1 - iibsiga PC
First xirmaan telefoonka daaqadaha si computer isticmaalaya cable USB kala ayna u oggolaadaan in computer si aad u ogaado. Marka waxa la ogaan karo oo keliya furo qalabka.
Hadda waxaad u baahan doontaa in aad nuqulka faylasha sida sawiro, music, videos ka SD kaydinta ama kaydinta telefoonka iyo badbaadin si aad u computer at hal meel. Waa in aad gacanta ka dooro oo dhan files iyo fayl ka goobta saxda on your computer oo u badbaadin doonaa in hal meel.
Hadda, xiriiriyaan Blackberry oo ku xidhmaan PC isticmaalaya cable USB ah ayna u oggolaadaan in computer si aad u ogaado. Hadda fur drive ee Blackberry. Gacanta kaliya wareejin xog kasta oo tilifoon galalka kala.
Habkani shaqeeyaa wanaagsan nooc file universal sida music, video iyo qoraalka. Wixii xiriiro waxaad u baahan doontaa inay u dhoofiyaan xiriirada oo dhan in ay u file eCArd iyo kala iibsiga in gacanta on inay telefoonka aad Blackberry oo la furo ka telefoonka, kaas oo si toos ah u gudbiyaan faylasha. Qaabkan waxaa kaloo uu leeyahay wanaagsan iyo diidmo.
Waxaad gacanta ku wareejin karaa noocyo kala duwan file.
Transfer ee files leh size weyn waa ka fudud oo dhaqso.
Ha u baahan yihiin wax isku xirnaanta internet ama account abuurista si ay u gudbiyaan xogta ay u phone cusub.
Sida aynu nahay wareejinta faylasha gacanta, waqti qaadan kara haddii aad telefoon jirkaan ayaa files aad u tiro badan si ay u gudbiyaan.
Waxay si fiican u shaqaynayaan oo keliya files warbaahinta iyo document. Wixii xiriirada, barnaamijyadooda iyo Guda wac habkan ma aha waxtar leh.
Ka dib kala iibsiga, waxaad u baahan doontaa in uu abaabulo files wareejiyo on in aad telefoon.
Habka 2 - Isticmaalka muuqaalada blackberry hooyo ee suuqa kala iibsiga
Waxaad isticmaali kartaa qaababka hooyo iyo barnaamijyadooda aaladaha Blackberry si hagaagsan xog muhiim ah in aad ka phone daaqadaha jir ah u phone cusub Blackberry. Waxaad xisaabta aragti ku dari kartaa in aad ku darto oo aad xiriirada iyo jadwal si ay telefoonka, isticmaali barnaamijyadooda daruur si hagaagsan waraaqaha muhiimka ah, sawiro iyo videos in telefoonka.
Xiriiriyaan Internet (Wi-Fi door bidaayo)
App DropBox ama wax app kale daruur.
Hubi in xogta ka Windows Phone waxaa synced in account ka soo jeedaan sida Muuqaalka iyo DropBox.
Hubi in aad si wanaagsan isku xirnaanta Wi-Fi. Connect telefoonka aad Blackberry u-Wi Fi. Haddaba goob telefoonka aad Blackberry.
Hadda goobaha tagaan xisaabtiisu. Oo halkaasaannu ka, waxaad ku dari kartaa xisaab sida Outlook. Just isticmaalaan aqoonsiga la mid aad loo isticmaalo howlan phone daaqadaha.
Your telefoonka si toos ah synced doonaa in account Muuqaalka isticmaalaya tan aad leedahay doonaa xiriirada, hawlaha, jadwalka, iyo dhacdo synced in telefoonka aad Blackberry.
Si ay u helaan nooca xogta kale sida music, sawiro, iyo waraaqaha. Just rakibi barnaamijyadooda ku saabsan in aad blackberry. Isticmaal shahaadada aqoonsiga isla login in ay barnaamijyadooda sida WordPress in aad loo isticmaalo telefoonka Windows. File laga heli doonaa midigta ka WordPress oo lagala soo bixi karaa haddii loo baahdo.
Qaabkan waxaa kaloo ka shaqeeya ganaax cayn kasta oo xogta laakiin waxa ay sidoo kale leeyahay faa'iidooyinka iyo khasaaraha.
Waxa si fudud loo samayn karaa iyadoo la isticmaalayo telefoonka Blackberry laftiisa la xiriir wanaagsan Wi-Fi. No fiilooyinka USB, phone daaqadaha ama pc.
Xogta Waxaad si toos ah u hagaagsan doonaa oo is abaabulay oo ku saabsan Blackberry ay sabab u tahay jiritaanka codsiyada kala.
Ma aha in aad si gacanta dooran files kasta oo kale in habka hore.
Waa inaad hubisaa in daaqadaha waa synced xisaabaha sida Outlook, OneDrive, DropBox iwm aan habkan ma aha wax ku ool ah.
Waxaad u baahan tahay la xidhiidha cuntada Wi-Fi haddii xogta badan oo loo baahan yahay in lagu wareejiyay.
Waxaad u baahan tahay aqoonsiga kala duwan iyo barnaamijyadooda si hagaagsan nooc kasta oo xog ku saabsan in telefoonka aad Blackberry.
> Resource > Windows > Sida loo Demi Data ka Windows Phone in Blackberry